Public Kura | » स्वास्थ्यका लागि रङ्गीचङ्गी खानेकुरा कसरी लाभदायक ? स्वास्थ्यका लागि रङ्गीचङ्गी खानेकुरा कसरी लाभदायक ? – Public Kura
स्वास्थ्यका लागि रङ्गीचङ्गी खानेकुरा कसरी लाभदायक ?
हरेक दिन हामीलाई खानामा के खाने भन्ने द्विविधा हुन्छ । र यसमा सबैभन्दा पहिले उपलब्धता अनि त्यसको मूल्य र अन्त्यमा मात्र स्वस्थकर छ छैन भन्ने आधारमा हामीले के खाने भन्ने निर्णय लिइहेका हुन्छौँ ।
तर हाम्रो समग्र डायटलाई हेर्दा हामीलाई सबै आवश्यक पोषण तत्व पुगिरहेको छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ?
अनुसन्धानकर्ताहरुले यसअघि पनि हामीले खाने परिकार सकेसम्म विविध हुँदा राम्रो भन्ने गरेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी सुझाइएको उपाय भनेको ‘रेन्बो कलर फुड’ अर्थात रङ्गीचङ्गी खानेकुरा खानु हो ।
सबै रङका खानेकुरा खानुले विशेषगरी हाम्रो मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ भने मुटु रोगको जोखिम पनि कम गराउँछ । किनकि विभिन्न रङमा छुट्टाछुट्टै किसिमका स्वस्थकर गुण हुन्छन् ।
यसको उदाहरण हामीले मेडिटेरियन डायटलाई लिन सक्छौँ जसलाई वैज्ञानिकहरुले दुनियाँकै सबैभन्दा स्वस्थकर डायट बताउने गरेका छन् । यसमा धेरै थरीका फलफुल अनि सब्जी हुन्छन् । यस परिकारमा उनीहरुले विविध रङका खानेकुरा मिसाउँछन् ।
परम्परागत मेडिटेरियन डायटमा हामीले विभिन्न थरी ‘न्युट्रियन्ट्स’ र ‘फाइटो–न्युट्रियन्ट्स’ (पौष्टिक तत्व) सेवन गरिरहेका हुन्छौँ ।
फाइटोन्युट्रियन्ट्स भनेको बिरुवाले उत्पादन गर्ने एकदमै सानो रसायनिक तत्व हो जसले हामीलाई ठूला ‘न्युट्रियन्ट्स’ पचाउनमा मद्दत गर्दछ भने शरीरबाट विषाक्त हटाउनमा पनि प्रमुख भूमिका खेल्छ ।
त्यसैले सबै रङका खानेकुरा खानुले यस किसिमका मुख्य पोषण तत्व छुट्ने जोखिम कम हुन्छ ।
यसको अर्थ यदि हामीले कुनै एउटा रङको खानेकुरा कम खाने गरेका छौँ भने हामीले त्यसबाट प्राप्त हुने पौष्टिक गुण छुटाइरहेका छौँ ।
शाकाहारी या बिरुवामा आधारित खानेकुराहरुमा फाइटोन्युट्रियन्ट्सका साथै ‘केरोटेनोइड्स’ अनि ‘फ्लेभोनोइड्स’ पनि हुन्छन् जसमा ‘एन्टि–इन्फ्लामेटरी’ लाभ हुन्छ । र विभिन्न रङका बिरुवामा विभिन्न थरीका फाइदाकारक गुण हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि नीलो या बैगुनी रङका खानेकुरा जस्तै ब्लुबेरीको बिरुवामा ‘एन्थो साएनिन’ भन्ने विशेष तत्व पाइन्छ यसले मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम घटाउँछ भने मधुमेहबाट पनि जोगाउन सक्छ ।
यसैगरी खानेकुरालाई पहेँलो रङ दिने ‘फ्लेभोन्स’ ले पनि मुटु रोगको जोखिम कम गराउँदछ ।
पोषण तत्वका साथै बिरुवामा हुने यस्ता विशेष तत्वहरु हाम्रो शरीरका निश्चित भागसम्म पुग्ने भएर पनि विविध रङका खानेकुरा सेवन गर्न आवश्यक मानिन्छ ।
जस्तै ‘लुटेइन’ क्यारोटेनोइड समुहमा पर्ने एक एन्टि–अक्सिडेन्ट हो । यो हरियो सागपात र पहेँला सब्जीहरुमा उच्च मात्रामा पाइन्छ । यही लुटेइन हाम्रो आँखाको पछाडिको भागमा पुग्ने गर्दछ र ‘मेकुलर डिजेनेरेसन’ नामक उमेरसँगै हुने आँखाको रोगको जोखिम घटाउँछ ।
त्यस्तै अन्य रिसर्चहरुमा चाहिँ फ्लेभोनोइड्सले दिमागका लागि विषाक्त मानिने अल्जाइमर गराउने पदार्थलाई अवरोध गरि मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने देखाएको छ ।
२० वर्षसम्म ५० हजार भन्दा धेरै मानिसहरुको डायटबारे अध्ययन गरिसकेपछि हाभर्डकी टिआन–शिन येहले फ्लेभोनोइड प्रशस्त भएको खानेकुरा सहित सुन्तला, मरिच, सेलेरी र अङ्गुर खानेहरुमा ‘डिमेन्सिया’ हुने या दिमागी क्षमता घट्ने समस्या कम हुने गरेको पत्ता लगाएकी हुन् ।
येहका अनुसार पछि बुढेस्कालमा डिमेन्सिया या दिमागी असन्तुलनको कुनै उपचार हुँदैन त्यसैले अगाडिदेखि नै फ्लेभोनोइड प्रशस्त भएको खानेकुरा सेवन गर्नुले यसको जोखिम उल्लेखनीय रुपमा कम गराउनेछ ।
फ्लेभोनोइड्सलाई आफ्नो डायटमा समावेश गरि लाभ प्राप्त गर्न कहिल्यै ढिला नहुने पनि उनले बताइन् ।
येह भन्छिन् रङ्गीचङ्गी खानेकुरा खानुले एकै किसिमको खाना धेरै मात्रामा खाइँदाको गम्भीर असरबाट पनि मान्छेलाई जोगाउनेछ ।
उनी भन्छिन्, “हामीले खाने खानेकुराहरु एकदम जटिल किसिमका हुन्छन् । जस्तै सुन्तलाको जुसले दिमागी क्षमता घट्ने जोखिमलाई कम गराउँछ तर त्यही सुन्तलाको जुस धेरै खायो भने यसले टाइप–टु डाइबटिज गराउँदछ ।”
रेन्बो डायट वास्तवमा फलफुल र सागसब्जीमा मात्र सिमित नभएको पनि विज्ञहरुले बताएका छन् । जस्तै अन्य प्राकृतिक खानेकुरा : हब्र्स, मसाला, गेडागुडी, होलग्रेन र चियालाई समेत यसमा समावेश गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सेतो रङका खानेकुरालाई पनि रेन्बो डायटमा गन्न सकिन्छ जस्तै तोफुमा पनि थुप्रै ‘आइसोफ्लेभोन्स’ हुन्छन् । यसले केही क्यान्सरको जोखिम पनि कम गराउन सक्ने पाइएको छ ।
यसरी विविध रङका खानेकुरा खानुले समग्र रुपमा हाम्रो सागसब्जी अनि फलफुलको सेवन पनि बढाउँछ ।
अध्ययनका अनुसार रङ्गीचङ्गी खानेकुरा खान थाल्दा त्यसले व्यक्तिको स्वस्थकर डायट सेवन बढाउँदछ । बीबीसीबाट